Backgammon🥇 Faka futhi ujabulele kusuka ku-Emulator.online
I-Backgammon: ungadlala kanjani igxathu negxathu? 💡
Ukudlala i-backgammon online mahhala, nje landela lezi zinyathelo ngezinyathelo:
I-Paso 1 . Vula isiphequluli sakho osithandayo bese uya kuwebhusayithi yomdlalo Emulator.ku-inthanethi.
I-Paso 2 . Ngokushesha nje lapho ufaka iwebhusayithi, umdlalo uzovele uboniswe esikrinini. Vele uchofoze ku- "Ukudlala" futhi ungaqala ukudlala, khetha ukudlala ngokumelene nomshini noma dlala nomngani.
Isinyathelo se-3. Nazi izinkinobho ezithile eziwusizo. Can "Faka noma susa umsindo", Cindezela inkinobho"dlala"bese uqala ukudlala, unga"Misa kancane"y"Qala kabusha"noma kunini.
Isinyathelo se-4. Khipha zonke izingcezu ebhodini ngaphambi komphikisi wakho.
Ukubuyela emuva kwe-backgammon 🙂
Igama I-Backgammon igama elinikezwe imidlalo eliqukethe i- ibhodi lamathayili ezinhlobo ezahlukene nemibala, okudinga ukuba ihlelwe ngo indawo eyisicaba, imvamisa ibhodi, yingakho igama layo.
Ngokuya ngemithetho, ehlukile kumdlalo ngamunye, umuntu oyedwa noma abaningi bangabamba iqhaza. Ngenkathi eminye imidlalo idinga ukuthi ababambiqhaza basebenzise ukucabanga ngamasu noma ngamasu, ukuxhumanisa, ubuhlakani besandla, inkumbulo, ikhono lokudonsa, noma amanye amakhono, eminye imidlalo imane nje iyithuba elimsulwa, ukuwina noma ukulahlekelwa.
Ngokwemvelo, imidlalo ngokuvamile ayibandakanyi ukuvivinya umzimba, yize ezinye zibandakanya itafula futhi zenze imisebenzi ngaphandle kwalo. Imidlalo yebhodi ivame ukuhlukaniswa ngezigaba ezahlukahlukene ngokusho kwezici zayo ezikhethekile.
Lezi izibonelo ezithile zazo.
Labo sebenzisa amadayisi: Yimidlalo leyo basebenzisa amadayisi noma izingcezu ezilingana nazo, njenge ITauli, iLudo, iPaki, iBackgammon, Izinyoka namakhadi phakathi kwabanye.
Labo basebenzisa amathokheni: Ziyasetshenziswa futhi imidlalo esebenzisa amathokheni njengento esemqoka. Izibonelo zalolu hlobo lwemidlalo yilezi njenge i-domino noma i mahjong.
Imidlalo yebhodi yendabuko: Le yimidlalo edlalwa ebhodini, njengemidlalo yomndeni ye- chess (I-chess yaseNtshonalanga, i-Xiangqi noma i-Shogi "i-Chinese chess" noma "i-chess yase-Japan", i-Janggi noma i- "chess yase-Korea" noma i-Makruk, ebizwa nangokuthi "i-Thai chess"), zintokazi, I-chess yamaShayina, iHnefatafl (imidlalo yebhodi lomndeni waseJalimane), iMancala (imidlalo yebhodi lomndeni neSurrta.
Imidlalo yebhodi yesimanjeYize ingahlukanisi ngokusobala phakathi kwalokhu okubizwa ngokuthi "imidlalo yebhodi", le midlalo ibizwa kanjalo ngoba ezimweni eziningi isebenzisa isici ekuthuthukiseni imidlalo yayo. Eqinisweni, umhlaba waseBrazil uqoka imidlalo yempi edume kakhulu igama elithi "imidlalo yempi" ukuhumusha okungokoqobo.
Imidlalo Yabadlali abaningi: Zingabuye zinamathiselwe kwezinye izimo abadlali abangaphezu kwabathathu, kodwa badlala njalo. Phakathi kwabo kukhona ujimidlalo yamakhadi wendabuko, kungaba ngomkhumbi waseFrance noma waseSpain; noma imidlalo yamakhadi efana neHanafuda, okuyindabuko eJapan.
Ukuhluka kwesimanje nokuhweba kwemidlalo yamakhadi, yilawa imidlalo yamakhadi eqoqwayo efana noMlingo: Ukuhlangana noma i-Yu-Gi-Oh!.
Zadalwa maphakathi nawo-1970. Yimidlalo lapho indima ye omunye umuntu uvamise ukubeka abadlali ezimweni ezithile ezibavumela ukuthi baphumelele izivivinyo ukufeza inhloso ethile ukuthi ziyahunyushwa.
Eqinisweni, Isici seBackgammon ukulingiswa hhayi ukusetshenziswa kwetafula. Ama-Dungeons & Dragons uhlobo lwe-backgammon olubizwa ngokuthi yi-fantasy yamaqhawe, kepha kungekudala luza emakethe, lukhuthazwe ukuvela kwamanye ama-backgammon wezinye izinhlobo eziningi ezinjenge-westerns, i-buck sex, i-science fiction, i-space opera, i-gothic horror, amahlaya, ubuhloli, ukudunwa, njll.
Umlando we-Backgammon 🤓
Igama I-backgammon isuselwa egameni elithi gamen (kusuka esiNgisini sasendulo), okusho umdlalo.
Imidlalo yomndeni wakwaBackgammon yayiyi omunye wemidlalo yokuqala ukuvela. Iningi lazo lifaka ukugoqa idayisi noma into efana nayo njengamagobolondo, imbewu noma okokuxubha.
Lo mndeni uhlanganisa imidlalo eminingana evelele, kufaka phakathi iSenet (ikhophi yomdlalo itholakale ethuneni likaTutancamon), iNyout (umdlalo waseKorea), uPatolli (mhlawumbe umdlalo oyintandokazi wama-Aztec), iPachisi (umdlalo kazwelonke waseNdiya, neminye okuhlukile) kuLudo naseChispa) kanye neGame of the Goose (umdlalo waseYurophu owaduma ngekhulu le-XNUMX).
Kungashiwo ukuthi i-Backgammon iyi umphumela wezinguquko eziningi nokuthuthuka, kanye neminye imidlalo eminingi yasendulo esekhona kuze kube namuhla. Imvelaphi yayo ingahle ihlobene nemiphakathi yasendulo yaseSumeriya naseGibhithe. Amaphaneli angafani kangako nalawa anamuhla atholakala emathuneni aseNayile Valley eGibhithe, kanye nasezindaweni ezizungezile zase-Uri eMesopotamiya.
Ngaphambi kuka-800, kwavela umdlalo obizwa ngeNard ePersia. Ama-Arabhu kungenzeka ukuthi ayesewazi vele lo mdlalo, kanye neminye imidlalo, lapho anqoba iPheresiya ngekhulu lesi-XNUMX. AmaPheresiya wona-ke ayeseyifundile le midlalo kumaHindu, okungenzeka ukuthi ayeyazi ngamaShayina. Kepha kwakungama-Arabhu aphakamisa le midlalo yaba sezingeni lokubaluleka kangangoba abhala izincwadi zokuqala ngayo. INard nokuhlukahluka kwayo kutholakala ezindaweni eziningi e-Asia.
Kubukeka sengathi umdlalo weNard wethulwa eYurophu ngama-Arabhu, futhi ngokuhlangana nomdlalo weTabula kwaholela enguqulweni entsha. Kusetshenziswe izingcezu ezingama-30 ebhodini lamaphoyinti angama-24, ukunyakaza kuchazwa ngamadayisi ama-2.
Esikhathini esifushane umdlalo omusha waduma, wancintisana ne-chess indawo yokuqala phakathi kwezicukuthwane, indawo kamuva ethathwa yimidlalo yamakhadi.
Ekhulwini leshumi nesikhombisa kwavela okuhlukile okusha, kanye nokuthuthuka kwengxenye, okuholele ekuvuseleleni umdlalo nokusakazeka kwawo kulo lonke elaseYurophu. Waziwa eNgilandi njenge I-Backgammon, eScotland njengoGammon, eFrance njengoTrictrac, eJalimane njengoPuff, eSpain njengoTablas Reales nase-Italy njengoTavole Reale.
Esikhathini ngaphambi kweMpi Yezwe II kwaba nomkhuhlane wokugembula. Esinye sezizathu kwaba ukuqanjwa okusha okwenziwe ngumMelika ngo-1925, i- kungenzeka ukuphinda kabili inani lamaphoyinti adlaliwe. Kepha futhi, umdlalo waya ekunciphiseni.
Ngawo-1970, ngokungalindelekile, wathandwa futhi, kuze kube seqophelweni lokuthi namuhla kulula ukuthola ukuthenga zombili izingxenye namanyuwali. EMiddle East, iTrictrac igcine ukuthandwa kwayo futhi idlalwa kakhulu eLebanon nasemazweni angomakhelwane.
Izinto zokudlala i-Backgammon💡
Ukudlala i-Backgammon, udinga ababambiqhaza aba-2, ibhodi le-backgammon, amathayili amnyama ayi-15, amathayili amhlophe ayi-15 namadayisi amabili akudala anezinhlangothi ezi-6, anezindlu ezingunxantathu ezingama-24 ezihlelwe kusuka ku-6 kuye ku-6 futhi zahlukaniswa zaba izingxenye ezi-4.
Izingcezu noma amatshe - amnyama ayi-15, ayi-15 amhlophe
Ibhodi - Izindlu ezinemibala ezingama-24 ezihlanganisiwe zihlelwe kusuka ku-6 kuye ku-6 zahlukaniswa zaba izingxenye ezi-4
Inhloso: Susa wonke amathayili ebhodini ngaphambi komphikisi.
Imithetho yomdlalo we-Backgammon📏
Nansi a isifinyezo esisheshayo yemithetho ye-Backgammon:
Setha isidlali sokuqala ngokugingqa idayisi
Hambisa izingxenye ngokususelwa kumanani athathwe kudatha
Ukulingana kwedatha kuvumela ukuhamba okuphindwe kabili
Akuvunyelwe ukuhambisa izingcezu zakho ziye ezindlini ezinezingcezu ezingaphezu kwezimbili eziphikisanayo
Uma indlu eqondiwe inesiqephu esisodwa somphikisi, ingabanjwa
Qala ku susa izingcezu zakho ebhodini lapho bonke bekwi-quadrant yokugcina
Umdlalo we-backgammon ngumdlalo webhodi wendabuko, lapho owinile nguyena okwazi ukususa zonke izingcezu zakhe ebhodini kuqala.
Kepha uma udinga ukufunda imithetho ephelele, Sizishiya ngezansi.
Incazelo yesidlali sokuqala
Ngaphambi kokuqala ukunyakaza kwezicucu kuyadingeka chaza ukuthi ngubani ozoba umdlali ozodlala.
Ukuchaza ukuthi ngubani oqala umdlalo we-backgammon, umdlali ngamunye kufanele aqoqe u-1 afe. Noma ngubani othola inani eliphakeme kakhulu uzoba owokuqala ukudlala. Uma kwenzeka kuthayi, amadayisi akhishwa futhi kuze kuchazwe umdlali wokuqala. Lesi sakamuva kumele sithathe isinyathelo sokuqala, sisebenzisa inani ledayisi abazolidlala kuqala.
Isibonelo: Umdlali A ugoqa idiye bese uthola inani 5; umdlali B ugoqa idiye futhi athole nenani lesi-5 futhi; umdlali A ugoqa iday futhi futhi manje uthola inani elingu-4; umdlali B ugoqa idiye bese uthola inani elingu-6; Umdlali B uzoba ngowokuqala ukudlala ngamanani wedayisi 4 no-6 (amanani edayisi lokugcina elidlalwe ngabadlali A no-B).
Izingxenye ezihambayo 🧩
Ngemuva kwesigaba sokuchaza ukuthi ngubani oqala umdlalo we-backgammon, umdlali ngamunye, naye, kufanele roll 2 amadayisi bese uhambisa izingcezu zakho ngokuya ngamanani wedatha.
Wonke umdlali njalo hambisa izingcezu ohlangothini olulodwa, eyodwa ngokwewashi kanti enye iphikisana newashi.
Uma umdlali wamanje engakwazi ukwenza ukuhamba okuvumayo ngamanani atholakala kudayisi, owokugcina uzodlulisa ithuba.
Indlu eqondiwe yengcezu ayisoze yaba yilena esivele inezicucu zomphikisi ezimbili noma ngaphezulu. Uma indlu eqondiwe inesiqeshana esiphikisayo esingu-1 kuphela, iyabanjwa, ishiye ibhodi iye "kubha".
Lapho umdlali enesicucu esisodwa noma eziningi ezithathiwe, angenza kuphela izindlela zokusindisa, okungukuthi, ukunyakaza okususa izingcezu zakho ezithathiwe kubha bese uzibeka endlini, uhlala ulalela umthetho wokuthi indlu ekhonjiwe ayikwazi ukuqukatha isiqeshana esiphikisayo esingaphezu kwesisodwa.
Uma umdlali egingqa amanani afanayo kudayisi yakhe engu-2, unelungelo lokwenza ukuhamba okungu-4 ngamanani amadayisi esikhundleni sokuhamba okujwayelekile okungu-2.
Isusa izingcezu ebhodini
Umdlali angaqala ukukhipha izingcezu zakhe ebhodini le-Backgammon lapho zonke zikwi-quadrant engezansi (ebizwa nangokuthi isigaba sangaphakathi). Ukususa ucezu, umdlali kufanele aqoqe inani elilingana nenani lezikwele ezisele kudayisi. Uma uthola inani eliphakeme kunalokho okudingayo izingcezu ezikude kakhulu, kufanele ususe lezo zingcezu. Isibonelo: Uma izingcezu ezinde kakhulu zidinga ukuthi kususwe u-4 bese umdlali ethatha u-6, angasusa noma yiziphi zalezi zingcezu ebhodini.
Umnqobi womdlalo ngumdlali osusa zonke izingcezu zakhe ebhodini ngaphambi komphikisi.
Amathiphu wokudlala i-Backgammon🤓
Gwema ukushiya ucezu olulodwa kuphela ezindlini
Uma udinga ukushiya ucezu lodwa, zama ukulugcina lukude kakhulu nocezu lomphikisi
Gcina indlu yokugcina yomphikisi wakho ivaliwe
Hlanganisa izindlu eziningi ngangokunokwenzeka